News Mansarovar » नेपाली समाज र जनताको बहुदलीयजनवाद नेपाली समाज र जनताको बहुदलीयजनवाद – News Mansarovar
नेपाली समाज र जनताको बहुदलीयजनवाद
नेपाली समाजनिरन्तर विकसितहुदै आएको छ । वस्तुगत सत्य हो समाज । समाजलाई बझने र रुपान्तरण गर्ने काममात्र कम्युनिष्टले
गर्दछन । समाजको अन्तक्रियाबाट शक्तिजन्मने भएको हुदा समाजलाई क्रान्तीकारीहरुले अनिर्वायबुझन सक्नु पर्छ ।समाजको चरित्र बदलिदाक्रान्तीको चरित्र पनि बदलिन्छ ।
राजनिति सत्ता समाजभन्दाबाहिर हुदैन । समाजको चरित्र अनुसार नै क्रान्तीको बाटो तयार गरिन्छ । प्रधानअन्तरविरोधको पहिचानगरिन्छ ।जवजबको प्रकासमाक्रान्तीकाकार्यभारहरु तयार गर्दा नेपाली समाजनबुझि सहि दृष्टिकोण बनाउननसकिने हुदा समाजको चरित्र सवैको चासोको विषय बनेको छ ।
समाजविकासको चरणका हिसाबले नेपाली समाजयतिबेलाकहाँनेर छ? समान्ती, अर्धसमान्तीवापँजीवादी?कनै पनि समाजको चरित्र निर्धारण गर्दा त्यस समाजको मख्यउत्पादन सम्बन्धकुनहो भनेर हेर्नपर्ने हुन्छ।
वर्तमान नेपाली समाजको मख्यउत्पादन सम्बन्ध कन हो? सामान्तीअर्धसामान्तीवापजीवादी?सामन्तवादत्यो आर्थिक सामाजिकव्यवस्थाहो, जहाजमिनमाजमिनदारको नियन्त्रण हन्छ र त्यसै आधारमा उसले किसानमाथिआर्थिक,सामाजिक,सास्कृतिक,राजनीतिक र काननी सबै हिसाबले नियन्त्रण गर्छ। सामन्तवादकामख्यचरित्र हन्–जमिनदारी अर्थव्यवस्था, वंशानगतनिरंकश राजतन्त्रात्मकहकमीशासनव्यवस्था र भावीले लेखेको भाग्यएवं पृर्वजन्मपनर्जन्ममाविश्वास गर्ने ईश्वरवादीधर्म–संस्कृति।
हाम्रो मलुकमाहजारौं वर्षदेदि रहिआएको राजतन्त्रअन्त्यभएको छ र सामन्तीकालमा रहेर जागिर,बिर्ता,किपट,गुुठी र सेरा भृमिमध्ये गुठी केहीमात्रामाबाकी छ, अरु सबै छैनन्। जमिनदारी अर्थव्यवस्था र वंशानगत राजतन्त्रात्मकहुकमीशासनव्यवस्थादुबै ढलेका छन्।
सामन्तीउत्पादन सम्बन्ध अब नेपाली समाजको मख्यउत्पादन सम्बन्धका रुपमा छैन। समाज अब आर्थिक राजनीतिकहिसाबले सामन्तीअबस्थामा नरहीपुजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। तर नेपाली समाजमा परम्परादेखि रहिआएको भाग्यवादीधर्म–सस्कृति र सामाजिकविभेदको अवस्थाभने कायमै छ र त्यसको प्रभावहामी स्वयंम समेत छं त्यसैले समाजलाईपृर्ण पुँजीवादीभयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलतहुनेछ।
समाजपुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ।तर यहाँ हुर्कदै गरेको पुँजीवाद स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नभई पराश्रयी र दलालचरित्रको छ। यसले यहाकाश्रमजीवीवर्ग र उत्पादनशक्तिको विकासमा योग प्रगतिलाई सकारात्मक ढंगले अगाडि बढाउदैन। त्यसैले अबको हाम्रो मुख्यकार्यभार स्वतन्त्र राष्ट्यि अर्थतन्त्रअर्थात राष्ट्यि पुँजी र उत्पादनशक्तिको विकास गर्दै समाजवादकाआधार तयार पार्नु हो।
हिजो मूलतः राजनीतिकअधिकारका निम्ति लड्यौं र राजनीतिकअधिकार प्राप्त गर्यौ पनि।
तर कम्युनिस्ट राजनीतिकक्रान्तिलाई नै पर्याप्तमान्दैनन्। उनीहरु श्रमजीवीजनताकाअधिकारलाई आर्थिक,सामाजिक र सास्कृतिक क्षेत्रमाविस्तार गर्न चाहन्छन् र सिंगै समाजको आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छन्। त्यसैले अबको लडाइ श्रमजीवीजनताको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिकअधिकार प्रत्याभूतिकानिम्तिको लडाइ हुनेछ।
अबको लडाइ गरिबी, अभाव,अशिक्षा, बेरोजगार र पछौटेपन अन्त्यको निम्तिहुनेछ। यो लडाइ ध्वंसको होइन,निर्माण र विकासको हुनेछ। यसको अगुवाइगर्नु मुलुकमाप्रगतिशीलएवं क्रान्तिकारी शक्तिको दायित्यहुनेछ यो माक्र्सवादीदर्शनको प्रकासमामात्र संभाव छ ।
नेपालको क्रान्तितथाआर्थिक सामाजिक परिर्वतनको लागिमाक्र्सवादको सृजनात्मकप्रयोगको लागिजनताको बहुदलीयजनवाद अगाडि सरिहेको छ । सबैलाई नयाबर्ष को शुभकामना छ । लेखक ढकाल नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी अध्यक्ष हुन् ।